Wayne Rooney oo si dadban u weeraray Louis Van Gaal xilli uu amaan dusha ugu dhoobay Jose. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Wayne Rooney oo si dadban u weeraray Louis Van Gaal xilli uu amaan dusha ugu dhoobay Jose.
Wayne Rooney oo si dadban u weeraray Louis Van Gaal xilli uu amaan dusha ugu dhoobay Jose.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 29-08-16 10:40 AM Markii ay Manchester United guusha 1-0 ah ka gaartay Hull City ciyaarihii wareegga seddaxaad ee horyaalka England Premier League, kabtan Wayne Rooney ayaa ka mid ahaa tobanka shaqsi ee waqtigaas loogu hadalheynta badnaa Twitter caalamka oo dhan.
Dhowr sababood ayaana loo cuskan karaa arrinkaas, midda koowaad ayaana ah inuu caawiye ka ahaa goolkii guusha ee ka yimid Marcus Rashford. Tan labaad waxay aheyd inuu goolkaasi dhashay waqtigii ay taageereyaasha Man United u bixiyeen ‘Fergie Time’ – waana goolashii soo daahi jiray ee ay kooxdu guusha ku heli jirtay markii uu joogay Sir Alex Ferguson.
Man United ayaa haatan sagaal dhibcood ka shaqeysatay seddaxdeedii kulan ee ugu horreeyey Premier League, kabtan Rooney ayaana si dadban weerar ugu qaaday macalinkii hore ee Red Devils Louis van Gaal isagoo tilmaamay inuu tababaraha cusub ee kooxda ka dhisan Old Trafford Jose Mourinho uu durba saxay qaladaadkii ninka reer Holland.
Hubanti, Rooney wuxuu cuskaday sida wanaagsan ee ay kooxdu ku bilaabatay xilli ciyaareedkii ugu horreeyey ee Mourinho, waana wax aysan helin laba sanno oo uu joogay Van Gaal. Si la mid ah David Moyes ayaan helin bilowgaan oo kale muddo gaaban oo uu hogaaminayey Old Trafford.
“Waa inaad dib u eegtaa wixii uu qabtay Jose sannadihii uu joogay CHelsea markaasoo ay ku guuleysanayeen horyaalka markasta oo ay si wanaagsan ku bilowdaan xilli ciyaareedka. Haatan sidaas oo kale ayaan ku bilaabanay xilli ciyaareedkaan mana aanan helin natiijooyinkaan oo kale labadii ama seddaxdii sanno ee lasoo dhaafay bilowga xilli ciyaareedka, tani muhiim ayey inoo tahay koox ahaan,” ayuu Rooney u sheegay saxaafadda.
“Jose wuxuu kooxda keenay khibrad cusub, wuxuu kooxda keenay inay maskax ahaan guuleysteyaal noqdaan markale. Taasi waxay durba kaaga muuqan kartaa ciyaartoyda. Waana wixii kooxda ka maqnaa labadii sanno ee lasoo dhaafay. Waa xilli hore laakiin waxaan u baahneyn biloow nuucaan ah gaar ahaan aniga oo kalsooni badan qabna ayaa la aadayaa fasaxa kulamada heerka caalami. Seddaxdaan guul muhiim ayey inoo ahaayeen aniga oo maanka ku heyna in kulanka xigga aan wajaheyno Manchester City.”